Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် ဒေါင်လိုက် CNC ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဒေါင်လိုက် CNC ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ခုနှစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကျနော်တို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမှာ Taiwan ဒေါင်လိုက် CNC ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံတွေနှစ်အတွင်းကောင်းမှုတန်းပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့်ခံကြရသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ prompt ကိုပေးအပ်ခြင်းအာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်တည်ငြိမ်တဲ့တိုးတက်မှုအပေါ်မှီခိုအားထားလွန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ရေရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။
ပုံစံ - VL-1000
မျိုးဆက်သစ် VMC သည်တိကျမှန်ကန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိစေသည်,အလူမီနီယံကဲ့သို့ပစ္စည်းများ ၀ ယ်သူအများစုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထူးခြားသောဖြတ်တောက်နိုင်မှု,သံ,cooper နှင့်ခိုင်မာသောပစ္စည်း.
စက်အမြင့်တပ်ဆင်ထားသည်-စွမ်းရည် linear သံလမ်း.
X/Y/Z axis သည် pre ကိုလက်ခံသည်-ကြီးမားစွာချုံ့ထားသည်-အချင်းဝက်အူ.
၎င်းတွင်မြန်ဆန်တည်ငြိမ်သောအလိုအလျောက် tool ပြောင်းလဲမှုယန္တရားရှိပြီးမြင့်မားသည်-ထိရောက်မှု spindle.
X/Y/Z ဝင်ရိုးခရီးသွား:1000/510/၆၁၀ မီလီမီတာ
Spindle နှာခေါင်းကိုစားပွဲမျက်နှာပြင်သို့:၇၅-၆၈၅ မီလီမီတာ
X/Y/Z Ball ဝက်အူများ: Ø၄၀x၁၂ မီလီမီတာ
Servo မော်တာ(X/Y/Z):၃/3/4 kw
X/Y/Z ဝင်ရိုး:၃၅/35/၃၅ မီလီမီတာ
8,000rpm ခါးပတ် drive ကိုဗိုင်းလိပ်တံ
ဗိုင်းလိပ်တံရေနံအအေး device ကို
Foundation pads များနှင့် bolts များကိုချိန်ညှိသည်
ဝက်အူ-type chip conveyor အမျိုးအစားဖြစ်သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/vertical-cnc.html
ဒေါင်လိုက် CNC ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ ဒေါင်လိုက် CNC ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ
CNC ဒေါင်လိုက်စက်သတ်မှတ်ချက်: စားပွဲအရွယ်အစား(LxW):၁၅၀၀x၆၅၀ မီလီမီတာ တီ-slot နှစ်ခု(CDxWxNo):100x18mmx6T မက်စ်.စားပွဲတင်ဝန်:1600 ကီလိုဂရမ် X/Y/Z Axis ခရီးသွား:၁၄၀၀x၇၆၀x၇၀၀ မီလီမီတာ Spindle Taper သည်:BT-50 Spindle မြန်နှုန်း:၈၀၀၀ rpm(ခါးပတ် Drive) Spindle မော်တာ:၁၅/18.5 kw ဓာတ်ပြား-အမျိုးအစား&ကိရိယာသိုလှောင်နိုင်စွမ်း:လက်နက်မဲ့/20T လမ်းညွှန်ချက်များ:Hard Rail စက်အလေးချိန်:ကီလို ၁၁၀၀၀ Standard Accessories များ: Tool box လမ်းညွှန်အဖုံး leveling လုပ်ကွက်&မူလီများ သတိပေးမီးခွက်(၃ ရောင်) ဝက်အူပေါ်ကို Armless အမျိုးအစား ATC အလုပ်လုပ်အလင်း လေကြောင်းပေါက်ကွဲမှုဖြတ်တောက်ခြင်း ဗိုင်းလိပ်တံအအေးစနစ် Chip Enclosure အော်တိုဆီစနစ် ခါးပတ်အမျိုးအစား spindle 8000rpm Coolant စနစ် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောအီလက်ထရောနစ်လက်ဘီး စက်မှုလျှပ်စစ်&operating လက်စွဲ ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်3လခန့်အာမခံချက်:ယန္တရားအတွက် ၁ နှစ်အာမခံ,ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အာမခံချန်လှပ်ထားသည်.ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်